Jeegag cusub oo adag oo loogu talagalay soo -dhoweynta caalamiga ah ee Madaarka Prague
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Jeegag cusub oo adag oo loogu talagalay soo -dhoweynta caalamiga ah ee Madaarka Prague
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ilaa ogeysiis dambe, isbeddelada laga hirgeliyey labada boosteejo ee Madaarka Prague waxay saamayn doonaan dalxiisayaasha iyo sidoo kale muwaadiniinta Jamhuuriyadda Czech iyo waddamada EU+ ee ku soo noqonaya Jamhuuriyadda Czech.
Madaarka Prague si loo xoojiyo hubinta rakaabka marka ay yimaadaan.
Madaarka Prague wuxuu xoojin doonaa xakamaynta xaaladaha hadda jira ee lagu soo geli karo waddanka.
Laga bilaabo Sebtember 1, 2021, nidaamka imaanshaha dhammaan rakaabka u duulaya garoonka diyaaradaha Prague waa la hagaajin doonaa.
Sida ku cad tallaabada cusub ee ilaalinta ee ay hirgelisay Wasaaradda Caafimaadka ee Jamhuuriyadda Czech, Madaarka Prague, Booliiska Dibadda ee Jamhuuriyadda Czech iyo Maamulka Kastamka ee Jamhuuriyadda Czech ayaa xoojin doona xakameynta xaaladaha hadda jira ee gelitaanka dalka.
Wadajir ahaan, dhinacyadu waxay ka jawaabaan taraafikada sii kordheysa ee marka Madaarka Prague iyo suurtogalnimada in ay dalka u soo booqdaan hawlaha dalxiiska ee ajaanibta.
Laga bilaabo 1 Sebtember 2021, nidaamka imaanshaha dhammaan rakaabka u duulaya Garoonka diyaaradaha ee Václav Havel ee Prague waa la hagaajin doonaa. Ilaa ogeysiis dambe, isbeddelada laga hirgeliyey labada boosteejo ee Madaarka Prague waxay saamayn doonaan dalxiisayaasha iyo sidoo kale muwaadiniinta Czech Republic iyo dalalka EU+ ee ku soo noqonaya Czech Republic.
Madaarku wuxuu sii wadaa inuu ku dhiirri -geliyo rakaabka inay si qoto dheer u eegaan xeerarka la hirgeliyay horay. Kahor intaysan aadin Prague, waxay ahayd inay diyaarsadaan, oo ay si fiican u daabacaan, dhammaan dukumiintiyada, foomamka imaanshaha iyo xaqiijinta cudur-qaadista, haddii loo baahdo.
“Waxaan isku dubaridnaa qaabkan cusub wakiilo ka socda Wasaaradda Caafimaadka iyo ciidamada kale ee amniga ee ku sugan garoonka diyaaradaha. Waxaan sidoo kale kordhineynaa awoodayada shaqaalaheena waxaan xoojineynaa qalabka farsamada si aan u dardar galino geedi socodka oo dhan ee imaanshaha. Rakaabku waxay gacan ka geysan karaan dardargelinta jeegagga imaanshaha Czech, sidoo kale, iyagoo dib u eegay xaaladaha hadda jira isla markaana hore u diyaariyey dhammaan dukumiintiyada, ”Jiří Kraus, Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Agaasinka Madaarka Prague, ayaa yiri.